Kevin De Bruyne Oo Ka Wanaagsanaaday Cesc Fabregas – Chelsea Ma Qoomamayn Doontaa Bruyne?
HomeWararka MaantaKevin De Bruyne Oo Ka Wanaagsanaaday Cesc Fabregas – Chelsea Ma Qoomamayn Doontaa Bruyne?
Kevin De Bruyne waxa uu Chelsea u saftay laba ciyaarood oo kaliya, laba sannadood oo uu joogay
Lama siinin fursad uu isku muujiyo
Xili-ciyaareedkan, waxa uu Wolfsburg u dhaliyey ama caawiyey goolal ka badan inta uu Cesc Fabregas u qabtay Chelsea.
Fagbregas waxa uu Chelsea u dhaliyey afar gool, halka uu De Bruyne u saxeexay kooxdiisa 13 gool.
Ma kula tahay in Jose Mourinho oo sameeyey markii uu laacibkan reer Belgium u ogolaaday in uu si rasmi ah uga tago Chelsea?
Kevin De Bruyne iyo Cesc Fabregas? Jose Mourinho wuu garanayaa ka uu dooranayo.
Laacibka Wolfsburg ee De Bruyne horena uga mid ahaan jiray Chelsea, ayaa kaga wanaagsanaaday Cesc Fabregas gool caawinta iyo isbeddelka uu ku samayn karo ciyaarta iyo waliba in uu go’aamin karo natiijada ciyaarta isaga oo kooxdiisa ku hoggaamin karaya guusha lama huraanka u ah.
Sida ay qortay jariidada Dailymail, De Bruyne ayaa naftiisa ka dhigay mid ka mid ah ciyaartooyada ugu wanaagsan horyaalka Bundesliga ee dalka Germany isaga oo ka caawiyey Wolfsburg in ay ku raaxaysato kaalinta labaad, isla markaana horyaalkaba kula targamaysa Bayern Munich.
Labada ciyaartoy ee De Bruyne iyo Fabregas waxay ka ciyaaraan laba meelood oo kala duwan. Fabregas waxa uu kooxdiisa u istaagaa dhexda dambe ee difaaca xigta, halka uu De Bruyne u badan yahay afka hore ee weerarka.
Tan iyo markii uu Fabregas ugu wareegay Chelsea lacag dhan £30 milyan, waxa laga filayay in uu dhalin doono goolal ka badan intii lagu yaqaanay, isla markaana uu noqon doono xiddig kooxda ka caawiya in ay u sahlanaato gool dhalintu.
De Bruyne, waxa ay Wolfsburg sannadkii 2012 kaga iibsaday Chelsea £7 milyan oo kaliya, isaga oo ka tegay Chelsea oo uu ka waayey fursad isaga oo fadhiyi jiray kursiga kaydka. Waxa la siiyey in uu kooxda u ciyaaro laba kulan oo kaliya oo Premier League ah muddo laba sannadood ah, taasi waxa ay keentay in uu kooxda ka tago balse ficiltan ku jiray iyo hibada Illaahay u siiyey kubadda cagta ayaa ka dhigtay xiddig da’ yar oo isha lala raacayo.
De Bruyne waxa uu kooxdiisa u dhaliyey xili-ciyaareedkan 13, waxaanu caawiye ka noqday 19 gool oo kale oo ay saaxiibadii dhaliyeen. Halka Cesc Fabregas uu Chelsea u dhaliyey 4 gool oo kaliya iyo 18 kale oo uu caawiyey.
Chelsea baahi weyn uma qabto gool-dhaliyeyaal, waayo waxa safkeeda hore xaadir ku ah Diego Costa iyo Eden Hazard laakiin haddana tayada De Bruyne oo ay haysan lahaayeen, isla markaana heli lahaa fursad la mid ah ta uu ka helay Wolfsburg waxa ay Chelsea ka dhigi lahayd naadi awood badan.
Bilowgii hore ee xili ciyaareedka, Chelsea waxa ay ku naaloonaysay bandhig ciyaareed heersare ahaa oo uu garoomada la soo galay Oscar, kaas oo ay ammaan ugu jeediyeen xiddigaha sare Gary Neville oo ku tilmaamay in uu layaab ku noqday indhaha mucaashaqiinta ciyaaraha Ingiriiska, laakiin taasi may sii soconin, iyadoo uu hoos u dhac kale ku yimid Oscar.
Wolfsburg, waxay ku jirtaa kooxaha loo saadaalinayo in ay hanan doonaan Europa League xili-ciyaareedka, iyagoo gacan ka helaya maskaxda De Bruyne, waxa ay garaaceen Inter Milan, waxaanay u badan tahay in lugta labaadna ay sidan oo kale u badin doonaan.
De Bruyne, maalinta aanu gool dhalinin, waxa uu sallaxaa mid uu saaxiibkii dhaliyo, waxaana lagu tilmaamay in uu yahay xiddig soo baxaya oo dunida wax ku soo kordhin doona mustaqbalka dhow.
Waraysi: Xasan Waraabe-Cadde Oo Wasaaradda Ciyaaraha Ku Eedeeyey Inay Kaalin Ku Leedahay Dhallinyaradii Ku Halligantay Badda, Farriinna U Diray Madaxweynaha
21/04/2016 Abdiwahab Ahmed
Liverpool Oo Shaacisay Faa’iidadii Ugu Badnayd Abid Iyo Dakhligeeda Sannadkii Hore
01/03/2016 Abdiwahab Ahmed
Ibrahimovic: Mustaqbalka Manchester Wuu Ifayaa
31/07/2016 Abdiwahab Ahmed